Cristiano Ronaldo oo kula taliyay maamulka Juventus inay sameeyaan saxiixa xidig ka tirsan kooxda Barcelona – Gool FM
(Juventus) 17 Okt 2018. Wargeyska caanka ah dalka Spain ee “Don Balón” Cristiano Ronaldo ayaa ka codsaday saraakiisha kooxda Juventus inay sameeyaan saxiixa laacibka reer Croatia iyo kooxda Barcelona ee Ivan Rakitić suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
33 jirkan ayay wararka sheegayaan inuu xiiseenayo in kooxda Juventus uu kaga garab ciyaaro xidiga reer Croatia iyo kooxda Barcelona ee Ivan Rakitić, kadib marka uu furmo suuqa bisha January ee soo aadan, isla markaana loogu xoojiyo khadka dhexe bianconeri.
Ivan Rakitić ayaa ku dhawaaday suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay inuu ku biiro kooxda Paris St Germain, laakiin Barcelona ayaa iska diiday inay iska fasaxdo adeega laacibkeedan reer Croatia.
Wararka ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in kooxda Barcelona ay ugu ogolaan doonto in Ivan Rakitić inuu u dhaqaaqo Juventus, hadii ay kasoo gudbiyaan qiimo dhan 100 milyan oo euros ee ah lacagaha lagu kansali karo heshiiska uu ku joogo garoonka Cump Nou.
Si kastaba Ivan Rakitić ayaa wuxuu doonayaa inuu iska sii jooga garoonka Cump Nou ee kooxdiisa Barcelona, laakiin Juventus ayaa isku dayi doonta xili dhow ama xili fogba inay sameyso saxiixa Ivan Rakitić.